ဂျပန်လူမျိုးများ၏ ကိုးကွယ်မှု - JAPO Japanese News
သော 13 Dec 2019, 11:47 မနက်
အားလုံးပဲ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ကိုးကွယ်မှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး သိထားတာလေးများ ရှိကြသလား?
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနှင့်အတူပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အများဆုံး ကိုးကွယ်ကြပေမယ့်လည်း၊ ဂျပန်မှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာက အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ မတူဘဲ ကွဲပြားနေတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဂျပန်တွေ ဘယ်ဘာသာတွေကို ကိုးကွယ်နေကြလဲ မေးရင်တော့
နတ်ကိုးကွယ်မှု (ရှင်းတိုးဘာသာ) က ၉၉%
အခြား ကိုးကွယ်မှုတွေက ၇.၁% ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒီလို ကိုးကွယ်မှုမျိုးကတော့ အခြားနိုင်ငံတွေမှာ မရှိသလောက်ပါပဲ။
လူတော်တော်များများက ဗုဒ္ဓဘာသာရော၊ နတ်ကိုရော ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ ပုံပါပဲ။
ဘာသာတစ်ခုတည်းကို စွဲစွဲမြဲမြဲကိုးကွယ်ကြတယ်လို့ မရှိကြပါဘူး။
အခြား ဘာသာရေးနဲ့ ပက်သက်တဲ့ ထုံးတမ်းတွေကို လက်ခံထားနိုင်ကြတာကြောင့် ဆုတောင်းတဲ့အခါ၊ ကလေးမွေးတဲ့အခါတွေမှာ ရှင်းတိုးဘာသာရဲ့ နတ်ကွန်းတွေကို သွားကြပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါကျရင်တော့ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ထုံးစံအလိုက် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာ ဆောင်ကြပြန်ပါတယ်။
ခရစ်စ္စမတ်နှင့် ချစ်သူများနေ့ စတဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ ပွဲတော်တွေကိုလည်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပါဝင်ဆင်နွှဲကြပြီး၊ အသုဘ ကျတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သွားကြပြန်ရော။
ဂျပန်လူမျိုးတွေက ဘာဘာသာတွေကို ကိုးကွယ်နေကြတာပါလိမ့်? လို့ ခဏခဏ မေးခွန်းထုတ်ခံရပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံဟာ ဒီလို ဘာသာပေါင်းစုံကို ရောစပ်ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ရှေးခေတ်ကတည်းက ရှိခဲ့တာကတော့ ရှင်းတိုး ဆိုတဲ့ နတ်ကိုးကွယ်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယအိုယို့ရိုဇု လို့ ခေါ်ကြပြီးတော့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေတိုင်းမှာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာ နတ်တွေရှိနေကြတယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။
ဓားတွေ၊ မှန်တွေမှာ နတ်တွေရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရှိ နတ်ကွန်းတွေကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း ဓားတွေ၊ မှန်တွေပဲ ထားထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။
နတ်ကိုးကွယ်မှုအကြောင်း ထပ်ကွန့်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ခန္ဒာကိုယ်ထဲမှာလည်း နတ် ရှိနေတယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၅၀၀ခန့်က တရုတ်နိုင်ငံကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ ဘာသာရေးအသစ်တစ်ခု ရောက်လာခဲ့ချိန်မှာ ရှိနေနှင့်ပြီးဖြစ်တဲ့ နတ်ကိုးကွယ်မှုနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှာတို့ ပေါင်းစပ်သွားပြီး ဂျပန်နိုင်ငံမှာပဲရှိတဲ့ ဘာသာရေးတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရလဒ်အနေနဲ့ကတော့ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ နတ်ဆိုတာ ဘယ်လိုပုံစံဆိုပြီး တိတိကျကျ ရှိမနေတာပါပဲ။
ပြီးတော့ နတ်ကိုးကွယ်မှုကို ဂျပန်လူမျိုးတိုင်းက ယုံကြည်ထားကြတာ ဖြစ်ပြီး၊ နေ့စဉ်ဘဝရဲ့ ကြီးမားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်နေပေမယ့်လည်း အမှန်တကယ်မှာတော့ ဂျပန်လူမျိုး တော်တော်များများက စစ်မှန်တဲ့ နတ်ကိုးကွယ်မှုဆိုတာကို မသိကြပါဘူး။
ဂျပန်လူမျိုးတွေကို ဘယ်ဘာသာ ကိုးကွယ်တာလဲလို့မေးရင် “ ဘာသာမဲ့” လို့ဖြေတဲ့ လူတွေက များပါတယ်။ တကယ်တော့ ဘာသာမဲ့ တော့မဟုတ်ပေမယ့် (ရှင်းတိုး) နတ်ကိးကွယ်မှုကို မိရိုးဖလာကိုးကွယ်နေကြပြီးတော့ ထဲထဲဝင်ဝင် သိမနေကြတာပါ။
ဘာသာမဲ့ လို့ပြောပြီး နတ်ကွန်းသွားပြီး ရှိခိုးဆုတောင်းလိုက်၊ အဆောင်တွေ ဆောင်ထားလိုက် လုပ်နေကြလို့ပါ။
အသေးစိတ်ကိုတော့ နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ လောလောဆည် ပြောပြချင်တာကတော့ နတ်ကိုးကွယ်မှုရဲ့ လက်ခံထားတဲ့ သဘောတရားဆိုတာကတော့
လူလူချင်း ယုံကြည်ပြီး ရိုင်းပင်းကူညီရမယ်
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုကို လိုလားတဲ့ ဒီလိုအတွေးမျိုး တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ပျံ့နှံ့သွားရင် ကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိပါတယ်။
အားလုံးကရော နတ်ကိုးကွယ်မှုရဲ့ သဘောတရားကို ဘယ်လိုထင်ကြလဲ?
ဒီနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံး Cosplayer က ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ?
နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ သွားရောက်ကိုးကွယ်မှုကိုတားမြစ်လိုက်ရတဲ့ နတ်ကွန်း!!!
အအိနုဘာသာမှာ カムイကမုအိ ရဲ့အဓိပ္ပာယ်
မတော်တော့တဲ့ T-shirt ကိုမစွန့်ပစ်နိုင်တဲ့ သားလေးနဲ့ ဉာဏ်ကောင်းလွန်းတဲ့ မေမေ !!!!
လာဗင်ဒါပန်းရနံ့တို့ မွှေးကြိုင်နေတဲ့ Hokkaido !!!
ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့ ဇနီးမောင်နှံတို့ အတွက် အကြံဥာဏ် ၅ ချက်!!!!